शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०८ : ३२
अवचेतन मस्तिष्कको पुनर्निर्माण
सचेत मस्तिष्कको तुलनामा अवचेतन मस्तिष्क सयौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ। अध्ययनअनुसार अवचेतन मस्तिष्कमा संग्रहित ७० प्रतिशत सन्देश नकारात्मक, निराशाजनक र स्वयं आफैँलाई हराउने खालको हुने पुष्टि हुन्छ।
गर्भमाथि गम्भीर होऊ
२८ साता अर्थात् करिब सात महिनासम्मको गर्भवतीको कोखमा एउटा सग्लो मानवले आकृति लिइसकेको हुन्छ। गर्भको भ्रूणले श्वास फेर्छ, आमाको भावना, उसको सुखदुःख महसुस गर्छ। हाँसो र चिन्तालाई हृदयंगम गर्न सक्ने भइसकेको हुन्छ।
१४ वर्षसम्मका बालिकाहरु बाँच्नकै लागि शरीर बेचिरहेका छन्। दक्षिण अफ्रिका जाने बाटोमा लाइनै आफ्नो शरीर पस्किनका लागि तयार छन् उनीहरु। त्यस्तै सुनको खानी भएका क्षेत्रमा शारीरिक भोक बोकेकाहरुबाट पेटको भोक शान्त पार्न खोजिरहेकाहरु खुल्लमखुल्ला देखिन्छन्।
हरेक पुरुष उत्कृष्ट, स्तरीय महिला साथीको खोजीमा रहन्छ। आफूसँग प्रेमिका रहेको अवस्थामा पनि स्तरीय महिला भेट्न सकिने उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहन्छ। यो महिलामा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। जसरी महिला एक साहसी, मर्द र आत्मविश्वासी पुरुषको खोजीमा हुन्छ, त्यसैगरी पुरुष पनि कामुक, आकर्षक, स्तरीय महिलाको खोजीमा रहन्छ।
प्रहरी हाम्रो साथी !
कुनै पनि देशको सुशासन नाप्ने पहिलो अस्त्र त्यस देशको शान्ति–सुव्यवस्था हो। जुन देशमा जति बढी शान्ति, उति नै सुशासन भन्ने मानिन्छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रहरीले खेल्ने भूमिकाका बारेमा कुनै शंका छैन। जति बढी सक्रिय प्रहरी, उत्ति बढी शान्ति सुव्यवस्था !
भ्रूण हत्या र अमेरिकी अनुभव
नेपालमा नीतिगत रुपमा भ्रूण हत्या बढाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसले अमेरिका दुई घटनालाई नियालेर हेर्न प्रेरित गरिरहेको छ।
समस्याको दीर्घकालीन समाधान
केही वर्ष अध्ययन र तालिममा केन्द्रित हुनोस्। त्यसपछि तपाईंमा उचित कार्य क्षमताको विकास हुन्छ। तपाईंका लागि प्रसस्तै अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन्। चाहेको ठाउँमा, चाहेको संस्थामा र चाहेको वातावरणमा कार्य गर्ने विकल्प उपलब्ध हुन्छन्।
पुटिनकै वरिपरि घुम्दै रुस
गएको सोमबार संसद्को गतिरोध हट्यो। नयाँ सभामुखको उम्मेद्वारी दर्ता भयो। चर्चा भएजसरी नै अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुख निर्वाचित भए। यसअघि सभामुखमा स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा गरिएकी निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजिनामा गराइयो।
लजालुपन कसरी हटाउने?
आत्मविश्वास कम भएको मानिसको प्रमुख विशेषतामध्ये अत्यधिक लजाउनु एक हो। लजालु स्वाभावका मानिसमा अरुले के भन्लान्, अरुबाट आलोचित, अस्वीकृत र अपमानित हुनुपर्ने पो हो कि भन्ने डर हुन्छ। यही कारण यस्ता मानिस आफूले भन्न चाहेको भन्दैनन्, गर्न चाहेको पनि गर्दैनन्।
क्यालिगुलाका नेपाली अवतार
जे जति बिग्रियो, यिनै चार वर्षमा सबैथोक बिग्रियो। सिनेट (संसद) सबैभन्दा बढी पेलानमा यही बेला परेको थियो। संसदको आदेश नमान्ने, कुनै कुरा संसदबाट पास नगराउने, सांसदहरूलाई अपमान गर्ने उनको व्यवहार थियो।
आफूले चे चाह्यो, त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउँदै आएको सत्ताधारी दल नेकपाका लागि फलामको च्यूरा बनेर देखा परिन्, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे।
साथीको अभाव हुनुमा कसैको दोष हुनै सक्दैन। आफ्नै व्यक्तिगत कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। कारण एक, सामूहिकीकरणमा सहभागी नहुनु। हामी समाजमा रहे पनि समाजसँग घुलमिल हुन सक्दैनौँ।
इरान र अमेरिका दुस्मन कसरी भए ?
इरान र अमेरिकाको दुस्मनीका बारेमा कसैलाई बताइरहनु परेन। केही महिनायता बढेको तीव्र विवाद, तनाव र पछिल्लो समय इरानकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको अमेरिकाले हत्या गरेपछि संसारभर हलचल मच्चिएको छ।
पर्यटकले के खाने ? कहाँ जाने ?
भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न र पर्यटक आकर्षण गर्न अस्ट्रेलिया पुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहभागी भएको -याली अनुमतिबिना निकालेको भन्दै अस्ट्रेलियन प्रहरीले बीचैमा रोकिदिएछ।
लक्ष्य निर्धारणको कार्यदिशा
लक्ष्य नलिनेहरु र लक्ष्यप्रति गम्भीर नहुनेहरू असफल हुने भइहाले। केही महिना कार्य गर्नेहरु पनि किन असफल हुन्छन् ? यसको प्रमुख कारण हो, लक्ष्य निर्धारणको उचित, वैज्ञानिक कार्यदिशा नहुनु।
लोकतन्त्रको हत्या नगर
लेख्ने र बोल्ने अधिकारको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक पद्धतिको न्यूनतम आधार हुन्। जहाँ लागेको बोल्न पाइँदैन, चाहेको लेख्न पाइँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन। जब वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न बहानामा अंकुश लाग्छ, लोकतन्त्रको तत्काल हत्या हुन्छ।
वर्ष सकिएपछि भारतमा नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टीको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। वर्ष २०१९ लाई मिडियाले विडम्बनापूर्ण वर्षका रुपमा चित्रित गरेका छन्।
विगत कसरी भुल्ने ?
भविष्य पनि सत्य होइन, केवल अवधारणा हो। भोलि कसैलाई थाहा हुँदैन। अनुमान मात्र गरिने हो। यस्तो हुन सक्ला कि ! सायद अनपेक्षित परिस्थिति सिर्जना हुने पो हो कि ! परिणाम उल्टिने पो हो कि ! यस्तैयस्तै विचारधारा दिमागमा उत्पन्न हुने गर्छन्। जब भविष्यको बारेमा सोचिन्छ, सायदको कुरा बढी हुने गर्छ। यही हुन्छ भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।
संवेदना सिकाउने सिनेमा
हामीमा सामूहिकता नष्ट भएको छ र बहुमत हावी छ। कठिन अवस्थामा गरेको संघर्षबाट प्राप्त ‘नाफाको जिन्दगी’लाई ‘ब्याज’मा परिणत गर्दै सुविधा मात्र खोज्ने लोभी जमातबाट समाज आक्रान्त भएको छ।